Accueil > Gazetin'ny nosy > Mpiasan’ny SAMVA: Nampidirina am-ponja fa nanao fitokonana
Mpiasan’ny SAMVA: Nampidirina am-ponja fa nanao fitokonana
Voahitsakitsaka tanteraka ankehitriny ny zo fototra fahalalahana mitokona sy maneho hevitra izay arovan’ny lalàm-panorenana. Mpiasa eo anivon’ny SAMVA miisa 3 no nampidirina am-ponja vonjimaika eny Antanimora rehefa niakatra fampanoavana tetsy Anosy, omaly.
Ireto farany izay voampanga ho nanohintohina ny filaminam-bahoaka nandritra ny fihetsiketsehana nataon’ireo mpiasan’ny SAMVA, tany amin’ny tapatapaky ny volana desambra teo. Tsiahivina fa ny antony nahatonga ireo mpiasa nitokona tamin’io fotoana io dia ny fitakiana ny zon’izy ireo izay voalaza mazava tsara ao anatin’ny fifanarahana, anisan’izany ohatra ny tokony handoavana ny latsakembok’izy ireo any amin’ny CNAPS, ny fandoavana ny tambim-karama sy ny vata-karama fanampiny na ny “13ème mois”. Fitakiana tao anatin’ny filaminana tanteraka no nataon’ireto mpiasan’ny SAMVA kanefa dia izao noampangaina ho nanohintohina ny filaminam-bahoaka izao ary nampidirina eny Antanimora. Izao tranga izao dia manaporofo hatrany fa voahitsakitsaka tanteraka ny zo fahafahana maneho hevitra sy ny zo fototry ny mpiasa eto amin’ity Madagasikara ity satria olona mitaky ny zony amin’ny maha mpiasa azy no ampidirina am-ponja vonjimaika. Andrasana moa ny fotoam-pitsarana amin’iny taona ho avy iny, hahazo fahafahana madiodio, fahafahana noho ny fisalasalana, sa ho voaheloka higadra sazy mihatra? Ny ahiana aorianan’izao fanapahan-kevitra noraisin’ny fitsarana izao dia mety hitokona haneho ny tsy fifaliana manoloana izao fampidirana am-ponja ny naman’izy ireo izao ny mpiasan’ny SAMVA ka tsy hisy handroaka ny fako eto Andrenivohitra. Ny alarobia 10 janoary izao anefa no natokan’ny fitondram-panjakana ho andro tsy fiasana fa ho andro hanaovana fanadiovana faobe ny tanàna. Ny pesta anefa mbola tsy tena voafehy tanteraka sa havela hianaka indray?